Izwe akuqinisekile kangangokuthi akukho muntu ongaqinisekisa ukulondeka kwabantu, ukuphila nempilo, ukuphepha ngaphansi zonke izimo impahla yakhe nezinqe ingenakunyakaziswa nokunye. D. izinhlangano Ngaphezu kwalokho, zomthetho futhi akakwazi qiniseka ukuthi ibhizinisi labo is hhayi ezisengozini futhi naye Akunakwenzeka ukuba okuthile kwenzeke. Ekuqaphela zonke lezi zici, namuhla abantu abakuthandi engozini, futhi ukusebenzisa izinkampani zomshuwalense ezahlukene ezinikeza abazikhethayo ezihlukahlukene izinhlelo umshwalense ukuze. Enye inkampani enjalo kuyinto OAO "Hyde."
ulwazi olujwayelekile mayelana inkampani yomshuwalense "noHaidee"
"NoHaidee" - inkampani joint isitokwe, eyabonakala ku emakethe yomshuwalense Russia ngo-1993. ukwabelana yenkampani okungewakho bamasheya 32, phakathi kwabo kukhona kokubili abantu zomthetho futhi zemvelo. I-General okomqondisi uNkk Tatiana noHaidee. Inani inhlokodolobha ogunyaziwe inkampani ruble ayizigidi ezingu-120. Naphezu kweqiniso lokuthi "noHaidee" (inkampani yomshuwalense) kwamiswa eziyinkimbinkimbi kakhulu izikhathi umnotho isiRashiya, wakwazi ukunqoba wenzuzo nemiphumela yayo waqhubeka esebenza nokuthuthukisa kuleli zwe, okuyinto yanda ubushiqela nenkohlakalo wasivikela isikhundla salo ekuncintisaneni okushubile nge enkulu inombolo nezinqubo zemininingwane yezinye izinkampani zomshuwalense.
Okwamanje, "uHaidee," ingenye izinkampani yimpumelelo kakhulu futhi has uphethiloli ayo, isikhungo sezokwelapha yesimanje, ulwazi lomhlangano call centre, nesikhungo sezimo eziphuthumayo nokhomishana. It lucwaningo imisebenzi yayo eMoscow esise-Ural, Northwest izifunda. Petersburg kakade 22 legatsha "Hyde". Izigidi zabantu e inhloko-dolobha yaseRussia kwamasiko nekheli main ihhovisi indawo eyaziwa: inkampani yomshuwalense "uHaidee," Petersburg, Kherson emgwaqweni, njll 39A .. "NoHaidee" ibambisane eziningi ehola izinkampani emhlabeni yomshuwalense kanye Reinsurance ejensi, kuhlanganise-Korean RE, Polish RE, Fortis Corporate Insurance, GEN RE et al.
"NoHaidee" (inkampani yomshuwalense) izindawo ehhovisi Petersburg naseMoscow
Ukwamukela ukukhokhelwa ukuze Hull futhi CTP, pholisi kufanele uthintane igatsha Petersburg ka "Hyde", etholakala emgwaqeni Borovoy, 47. Ukuze uthole izinkokhelo ezihlobene umshwalense impahla, kuzodingeka ukuza egatsheni elise emgwaqweni Kherson, 4, 14. Inkokhelo sokuba sesikhundleni izinhlobo siqu umshwalense nazo eyenziwa Kherson emgwaqweni, 4/14. Ikheli amagatsha ezisele zingatholakala ku-website esemthethweni inkampani. E-Moscow, kuzo zonke izindaba zokuphepha kumele uxhumane nehhovisi yenkampani, esemgwaqweni emgwaqeni Yuzhnoportovaya, 5, ihhovisi 422.
Nazi izinhlobo umshwalense ezihlinzekwa inkampani "noHaidee"
"NoHaidee" (inkampani yomshuwalense) ungumnikazi 78 amalayisense, okuyinto lona ilungelo afeze izinhlobo ezahlukene umshwalense 15. Amakhasimende ahlinzekwa kule mikhiqizo umshwalense:
• Impahla umshwalense - kungaba ukuthathelwa umshuwalense ifulethi, indlu, villa, indlu
• Umshwalense ezikebheni kanye yezikebhe (okuthiwa amanzi CASCO), kanye ukuphila nempilo abanikazi abafanele ingozi yabo.
• Uhlelo wokuvakasha - umshwalense impahla lezihambi; wokuvakasha ngokumelene izingozi.
• umshwalense Ingozi izingane, abantu abadala, abasubathi.
• umshwalense wezempilo. Njengoba for umshuwalense wezempilo, "Hyde" (inkampani yomshuwalense) isungule izinhlelo ezinhlanu: "Umndeni Doctor" Dispensary "orel", "Vakashela" (Uhlelo umshwalense umfundi angaphandle), uhlelo kwamazinyo izingane kanye VHI.
• Auto - CASCO, CTP, DSAGO.
"NoHaidee" (inkampani yomshuwalense): Hull, ukubuyekezwa abanikazi imoto
Phakathi izinhlelo umshwalense 15 ezihlinzekwa inkampani "Hyde", ethandwa kakhulu phakathi amakhasimende ukujabulela yomshuwalense auto CASCO. Abashayeli bathi izinqubomgomo CASCO esikhishwe ngaphansi kwezimo ezimvunayo kakhulu pholisi. Ochwepheshe yenkampani basekelwe zomthetho ngisho izimo umshwalense eyinkimbinkimbi kunazo oqeqeshiwe. CASCO abanikazi inqubomgomo waqinisekisa ukuthi inkampani ngokushesha ngangokunokwenzeka kwenza zonke izinkokhelo ngaphansi inkontileka. Ngaphezu kwalokho, amakhasimende bathi bayakwazi wonge isikhathi ngenxa yokuthi ukuhlolwa izimoto ezikhiqizwa enkonzweni esiteshini yenkampani lobuchwepheshe, lapho senziwa ngaphandle ukuhlolwa ikhadi. Ngaphezu kwalokho, esimweni izinkinga imoto lapha kungenzeka ukwenza kube ulungiswe izinga. Okuwukuphela abalulekile ikhasimende ukungeneliseki esifanele, ngezindleko eliphezulu kakhulu inqubomgomo CASCO.
Ukukalwa nokwethenjelwa impumelelo inkampani yomshuwalense "noHaidee"
Minyaka yonke inkampani "noHaidee" uqinisa isikhundla yayo yomshuwalense emakethe Russian. Ngokwesibonelo, uma ngo-2010, izinkampani 500 bhalisiwe umshwalense "noHaidee" wathatha indawo 129th ngokuya sezimali 2011, amaphrimiyamu kukhuphuke ngo-20,5%, kanti inkampani, sesinyukele ku-111 endaweni th (ruble ayizigidi ezingu-592). Ukwanda kwaqhubeka, futhi ngo-2012 simo izinkampani zomshuwalense "noHaidee" kakade senzeka 93rd (ruble ayizigidi ezingu-730), kanti ngo-2013 - 86 th (ruble ayizigidi ezingu 926). ezikhulayo ngokuqhubekayo futhi inani izivumelwano: ngo-2010 - 46 eziyinkulungwane, futhi ngo-2013 - 200 ayizinkulungwane. Minyaka yonke waqinisekisa ezingeni lelisetulu ukuthembeka enkampanini - "A" level.
Impumelelo enhle kakhulu inkampani "noHaidee" izuzwe emkhakheni lomhlabathi ezokuthutha. Kule ndawo, kuba endaweni 34.
impendulo kwamakhasimende on imisebenzi ye AOA "noHaidee"
Njengoba kuphawulwe ngenhla, omunye izinkampani yimpumelelo kakhulu emakethe Russian yomshuwalense kuyinto "noHaidee" - enkampanini yomshuwalense. Izibuyekezo amakhasimende esibonga - ubufakazi engcono leli qiniso. Izinkampani zomshuwalense ukhombe nasezingeni eliphezulu of service nokwethembeka.
Kuyamjabulisa futhi ukhetho olukhulu izinhlelo umshwalense ezihlinzekwa inkampani. Kasibili everyone, noma ngabe umuntu wemvelo noma womthetho ngubani uyakwazi ukukhetha Uhlelo umshwalense evumelana best izidingo zakhe siqu kanye amathemba. Ngaphezu kwalokho, izinkampani zomshuwalense weneliseka izimo ezikahle, esiphethweni okusheshayo isivumelwano, izinkinga isinqumo wokusebenza kanye nezikhawu ezimfushane, phakathi kwesikhathi lapho inkokhelo eyenziwe amacala umshwalense.
Umuthi 'Reglan "imfundo